Samachar Batika || News from Nepal » बिहे लगतै नायक पल शाहले आंचललाइ यो के गरे ? ड’राइन आंचल !
बिहे लगतै नायक पल शाहले आंचललाइ यो के गरे ? ड’राइन आंचल !
पोखरा – लामो समयसम्म फिल्म जगतमा पल शाह र आँचल शर्मा प्रेममा रहेको चर्चा चलिरह्यो । यो जोडीलाई दर्शकले रुचाए । म्युजिक भिडियोमा हि’ट भए पनि पल र आँचलले एकसाथ अभिनय गरेका फिल्मले भने खासै व्यापार गर्न सकेनन् ।
यी दुईको भेट ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ को अडिसनका क्रममा भएको थियो । फिल्म वृत्तमा चर्चा चलिरह्यो, पल र आँचल प्रेममा छन् । फ्यानलाई पनि यही लागेको थियो । तर, यी दुईले आफ्नो प्रेमको ह’ल्लाबारे कहिल्यै स्वीकार गरेनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा इन्स्टाग्राममा पलले आँचल फलो गरेका थिए । आँचलको इ’ङ्गेजमेन्टको समयसम्म पनि यी दुईले एकले अर्कालाई फलो गरेका थिए । रमाइलो कुरा त पलले जम्मा १० जनालाई फलो गरेका थिए । तीमध्ये एक थिइन् आँचल शर्मा ।
फागुन २९ गते आँचल शर्माले पेशाले डाक्टर रहेका उदिप श्रेष्ठसँग बिहे गरे । धुमधामका साथ आँचल र उदिपको बिहे भयो । यता इन्स्टाग्राममा भने पलले आँचललाई अ’नफलो गरेका छन् । पललाई इन्स्टामा १ लाख ५० हजारले प’छ्याएका छन् ।
उदीप श्रेष्ठको दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । आँचलले पलसँग क’सम तो’ड्नुमा उदिपको धनसम्पत्ति हो भन्ने चर्चा फिल्मी क्षेत्रमा चलेको छ । उदिप धनी परिवारका हुन् ।
पलले मात्र आँचललाई अ’नफलो गरेका होइनन् । आँचलले पनि पललाई अ’नफलो गरेकी छिन् । जबकि, आँचलले पललाई फिल्म क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो साथी भएको भन्दै तारिफ गर्दै आएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय आँचल शर्मा र पल शाहले पनि एकसाथ काम पनि गरेका छैनन् । किन एकले अर्कालाई अ’नफलो गर्न बा’ध्य भए, त्यो त समयसँगै खुल्दै जाला ।
उदिपसँग औठी साटेसँगै नयाँ खालको अनुभव आएको आँचलले भनिन् । उनले भनिन्–‘मलाई त सुरुमा ड’र पनि लागेको थियो । इन्गेजमेन्टका लागि तयार हुँदै गर्दा आँखाबाट आँ’शु पनि आयो ।’
आँचल र उदिप करिब डेढ बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । बिहेकोगरेसँगै निकै नै उत्साहित देखिएका आँचल र उदिपले दुइको नाम मिलाएर ‘आदिप’ राखेका छन् । पछिल्लो समयमा बलिउडको शैली नेपालमा पनि भित्रिएको छ । कलाकारहरुले आफ्नो जोडीलाई मिलाएर नयाँ नाम राख्न थालेका छन् ।
अविवाहित नायिका आँचल शर्माले किन गरिन विवाहित उदीप श्रेष्ठसंग विवाह ? यसै क्रममा नेपालमा फिल्म जगतमा नायिकाहरुले धमाधम विवाह गर्ने क्रम चलेको छ । धेरैले चलचित्र क्षेत्रभन्दा फरक विधाका पुरुषसँग विवाह गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रकै नायकसँग कतिपयको प्रेम चल्यो तर टु’ट्यो पनि । चलचित्र क्षेत्रको भन्दा भिन्न विधाका पुरुषसँग नायिकाहरुले विवाह गर्न थाले । यसमा अहिले नायिका आँचल शर्मा जोडिएकी छिन् ।
आँचलको कुनैबेला पल शाहसँग अ’फेयर चल्यो । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै विवाह गर्ने घोषणा गरे । तर, यसै हप्ता आँचलले सबैलाई च’कित पार्दै चिकित्सक डा. उदिप श्रेष्ठसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि करोडौं ख’र्च गरेर ।
पलबाट टाढिने क्रममा आँचलले फेसबुकमा अ’नफलो गरिन् । लगत्तै फेसबुकमा विवाहको तस्बिरहरु हालिन् । आँचलले विवाह गरेका उदीप श्रेष्ठको दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । आँचलले पलसँग कसम तो’ड्नुमा उदिपको ध’नसम्पत्ति हो भन्ने चर्चा फिल्मी क्षेत्रमा चलेको छ । उदिप धनी परिवारका हुन् । चलचित्र क्षेत्रमा नाम हुने तर दाम कमै हुने भएकाले पनि नायिकाहरु पैसावाल पुरुषसँग विवाह गर्दै आएका छन् । चलचित्रबाट नाम कमाउने र त्यही नामबाट ध’नाढ्य पुरुष खोज्ने परिपाठी समेत विकास भएको छ ।
प्रकाशित मिति २ चैत्र २०७६, आईतवार १४:३८